Mahad Salaad: Kenya waxay Farmaajo ka diiday in ay u soo afduubaan Axmed Madoobe | Dhacdo
Home Wararka Maanta Mahad Salaad: Kenya waxay Farmaajo ka diiday in ay u soo afduubaan...
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inta la’ogyahay inaanay Kenya waxba u dhimin Somaliya, aan ka ahayn in ay ka diiday in isagoo jeebeysan lagu soo wareejiyo Madaxweynaha Jubbaland.
“Inta aan ognahay Kenya waxba kama haleyn Somaliya, marka laga reebo in ay ka diiday Farmaajo in ay u soo afduubaan Madaxweyne Axmed Madoobe, una keenaan isagoo lugaha iyo gacmaha ka xiran.” Ayuu yiri Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad.
“Waxa kale oo ceeb iyo foolxumo ah, ayna ahayd in laga xishoodo Safiirka Kenya ee la sheegay in uu dalka isaga baxo maba jooggo Somaliya oo mar hore ayuu dalkiisii u laabtay, Safiirkeenii Kenya inoo fadhiyayna Muqdisho ayuu dhex meereysanayaa.” Ayuu yiri Mudanaha Golaha Shacabka ka tirsan.
Tani ayaa kaga sii dari karta xiriirka labada dowladood, oo muddooyinkii ugu dambeysay xumaa.
Previous articleMa run baa in dal kale uu u cararay Hoggaamiyihii Gobolka Tigreyga?
Next articleShabaab oo saaka weerar culus ku qaaday deegaanka Bacaadweyne